TARATASY FAHAZOAN-DALANA MAMILY :: Hihemotra indray ny fe-potoana amin'ny fanovana ho biômetrika • AoRaha
TARATASY FAHAZOAN-DALANA MAMILY Hihemotra indray ny fe-potoana amin’ny fanovana ho biômetrika
Tsy tratra indray ny fe-potoana. Hihemotra ao anatin’ ny fotoana tsy voafetra ny fe-potoana hamadihana ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiara sy ny taratasin’ny fiara na «carte grise» ho biômetrika.
Araka ny tetiandron’ny Sampan-draharaha misahana ny fanomezana taratasy fahazoan-dalan’ny fiara na ny CIM dia ny sabotsy lasa teo no tokony ho nifarana izany. Mbola ny enimpolo isan-jaton’ny mpamily ihany hatreto no nahavita ny fanovàna ireo antontan-taratasy ireo. Ny any amin’ny faritra, araka ny tatitry ny minisiteran’ny Atitany no tena betsaka tsy nahavita nanova izany ho biômetrika.
Marihina fa efa inefatra nahemotra ity daty ity. Mbola manana fotoana izay rehetra tsy nahavita namadika ho biômetrika ny taratasy fahazoan-dalana mitondra fiara, hamadihana izany. Hialana amin’ny hosoka sy fisandohana no antony hanovana ireo taratasy ireo ho biômetrika, araka ny fanazavana hatrany.
Fiparitahan’aretina Zaza roa matin’ny takilodrano tany Marovoay
Tontolon’ny serasera Hakatona ireo haino aman-jery tsy ara-dalàna
Vono olona tany Ambilobe Tratra ny lehilahy faharoa isan’ny nahafaty an’ilay vehivavy bevohoka
Vonjy aina amin’ny main-tany Nandefasana sakafo sy fiarabe hamatsy rano any Atsimo
FIHAONANA AN-TAMPON’NY VONDRONA AFRIKANINA :: « Ady goavana iraisan’i Afrika ny famongorana ny kolikoly », hoy ny Filoha
Taksiborosy sy kamiao